Fampihetseham-batana ho an’ny ankizy kely
Tsy ny lehibe ihany no tokony hanao fampihetseham-batana fa dieny vao kely ny ankizy dia efa tsara hanmpanaovina izany.
Ho fanamafisana ny hozatra kely ananany no anton’izany. Ireto àry misy karazana fampiasam-batana azonao ampanaovina azy ireo ao an-trano. Sady miendrika kilalao izy ireto no hanamafy ny hozatra keliny ihany koa
Fampihetseham-batana 1 :
Mila seza maromaro eto mba alahadahatra. Asaina manao paozy toy ny mandady ny ankizy. Asaina miditra ao ambanin’ireo seza ka miezaka ny tsy handona ireo tongon-tseza. Ny hozatry ny kibo sy ny lamosina no miasa eto.
Fampihetseham-batana 2 :
Miasa tsiroaroa ny ankizy eto. Mila baolina iray ka mety foana na dia baolina fanaovana tenisy na baolina lehibe aza. Atao matory amin’ny kibo mifanatrika izy ireo. Asaina mifanome ilay baolina amin’ny tanan’ila izy ireo. Tsy avela hilatsaka ilay baolina raha tsy mahavita mifanome ilay baolina im-polo ohatra. Ny hoza-kibo sy ny hozatry ny soroka ary ny lamosina no miasa eto.
Fampihetseham-batana 3 :
Asiana servieta na lamba lehibebe eo amin’ny tany. Asaina matory eo ny ankizy iray miezaka manao izay tsy hampiongana azy avy eo ambonin’ilay lamba ka ny hozatry ny lamosina sy ny fitombenana no asaina akainkony ahavitany izany. Ny faharoa kosa asaina misintona ilay servieta moramora.
Fampihetseham-batana 4 :
Mila servieta tonta indray amin’ity indray mitoraka ity. Asaina mamindra mandroso izy ireo ka tsy mahazo esorina eo ambonin’ilay servieta ny tongotra roa fa eo ambonin’ilay servieta ihany ny tongotra roa. Atao kosa izay hanatratrarana ny tanjona napetraka eny aloha. Sady manamafy ny hoza-kibo ity fampihetseham-batana farany ity no manamafy ny hozatry ny fitombenana koa.